Huawei weputara Huawei Y7 2019, smartphone maka akpa nile na AI | Akụkọ akụrụngwa
Ignacio Sala | | Mobiles, Ihe ngosi
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, anyị ahụla otú onye na-emepụta Asia bụ Huawei si bụrụ na ọ bụghị naanị a ọzọ n'ime ekwentị dị elu, ma echefughikwa etiti ma obu ntinye. Ihe ngosi nke Huawei Y7 2019 na-akwado ya, ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere obi abụọ ọ bụla.
A na-ezubere Huawei maka ndị na-eto eto na-achọghị ma ọ bụ enweghị ike iji akụ na ụba ụfọdụ ekwentị na-akwụ ụgwọ, ebe ọ bụ na naanị ihe na-adọrọ ya adịghị na ọnụahịa naanị, kamakwa na n'azụ igwefoto nke enyere aka na ọgụgụ isi hazie njide ma si otú a nweta nsonaazụ kacha mma.
Huawei Y7 2019 na-enye anyị ihuenyo Dewdrop nke anụ ọhịa 6,26-inch Qualcomm Snapdragon 450 8GHz 1.8-Core, 3GB Ram, 32GB Esịtidem Nchekwa, Igwefoto dị n'azụ 13 nke anụ ọhịa nwere oghere f / 1.8 tinyere nke abụọ mpx 2. Ngwakọta nke anya abụọ ahụ na-enye anyị ohere iwere eserese ebe ma isi okwu na ndabere dị iche iche. Ihe a niile ga - ekwe omume site na iji ọgụgụ isi.
Ọgbọ ọhụrụ a nke Y7, -enye anyị 50% ọzọ ìhè tụnyere ya ụzọ. Ọnọdụ abalị na-ewe oge anọ nwere ọhụụ dị iche iche na-ejikọ ha iji nweta nsonaazụ kacha mma, otu usoro ọ na-eme mgbe anyị jiri ọnọdụ HDR, iji meziwanye usoro dị ike.
Ọkwa dị n'elu ihuenyo na-etinye igwefoto n'ihu mpx 8 mpx, àjà a imewe ebe fọrọ n'ihu niile bụ a na ihuenyo. Site na igwefoto a n'ihu, Huawei na-enye anyị sistemụ ihu ihu, sistemụ nchekwa nke yana ihe nkwụnye akara mkpịsị aka na azụ.
Huawei Y7 2019 bụ ejiri gam akporo Pie 9 esonyere Huawei EMUI nhazi usoro, oyi akwa nke dịka afọ agafeela obere na-adịghị etinye aka, ihe ndị ọrụ ga-enwe obi abụọ na-enweghị ekele. Batrị ahụ bụ akụkụ ọzọ kachasị mkpa nke ọdụ a, ebe ọ nwere ikike nke 4.000 mAh.
Ahịa na nnweta nke Huawei Y7 2019
The Huawei Y7 2019 ga-kụrụ ahịa na March 15 si 199 euro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Ihe ngosi » Huawei weputara Huawei Y7 2019, smartphone maka akpa ya niile na AI
Nwere ike zụta Amazon ikwughachi Input na 15 euro ego